Ayikho eqinisekisa ukuthi uBashir usehambile e-SA | News24
Ayikho eqinisekisa ukuthi uBashir usehambile e-SA
Pretoria – Ayikabi khona imibiko eqinisekiswe ngokusemthethweni ukuthi uMengameli waseSudan u-Omar Al-Bashir useyifulathele iNingizimu Afrika, ngokusho kommeli kahulumeni enkantolo.
Ummeli kahulumeni wakuleli uWilliam Mokhari utshele iNkantolo ePhakeme yasePitoli ukuthi akucacanga ukuthi belikhona igama likaBashir kwizikhulu ezigibele ibhanoyi eliya eSudan okubikwa ukuthi lisukele esikhumulweni sezindiza saseWatrekloof ngoMsombuluko ekuseni.
OLUNYE UDABA: UMnyango uthi awumazi ungalaphi u-Al Bashir
Umthombo wezindaba i-Al Jazeera ucaphune ungqongqoshe wezokusabalalisa ngolwazi waseSudan ngoMsombuluko ethu umengameli uBashir usendleleni elibuyela eSudan.
IWaterkloof ayinazo izisebenzi zomnyango wezasekhaya ezisebenza ngokugcwele,” kusho uMokhari.
“Sengiqinisekisiwe ukuthi iWaterkloof ibinalo ulwazi olugcwele ngesinqumo senkantolo sivimbela uBashir ephumele ngaphandle kuleli,” kusho uMokhari enkantolo.